Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2760 - 2761 | XperimentalHamid
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2760 - 2761
Kwangathi 9, 2021 by I-Hisam Ullah
Funda Isahluko 2760 - 2761 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
Bhalisela ukuvuselelwa okuningi
Faka ikheli lakho le-imeyili
UZhongquan empeleni wayengalindele ukuthi uCharlie angakuvuma kalula kangaka.
Lokhu kukhulu okungazelelwe kwammangaza.
Ngemuva kwesikhashana, wabubula ngokungazi: "Charlie, uyahlanya!"
UCharlie wahwaqabala: “Ngihlanya kuphi?”
UZhongquan ubabule: “Uyahlanya ngoba uhlasele uZynn lapho bekungafanele! Cabanga ngakho! Uyindodana endala yomndeni wakwaSu. Wanyamalala eShangri-La. Singawushiya eceleni umndeni wakwaWade? ”
UCharlie ubuze, “Ini? UChengfeng ukubuze? ”
“Yebo!” UZhongquan uthe ngobuso obudabukile, “uChengfeng” wangishayela ucingo wangithethisa wathi angilwe nomndeni wakwaWade! Uyazi, imindeni yethu emibili ihlale ikhuluma kodwa ingenzi lutho. Uma siphula imithetho kulokhu, umndeni wakwaSu nakanjani uzophindisela kabuhlungu. Nathi siyiqembu elinephutha, futhi kuzoba nzima ukusukuma ngaleso sikhathi! ”
UCharlie wamomotheka: “Ubize lokhu kuphela?”
UZhongquan wezwa ukwedelelwa ngezwi likaCharlie, futhi wakhuluma ngokukhulu ukuzithoba.
Wathi: “Charlie, ngiyazi ukuthi unentukuthelo embi, futhi awuthandi ukubekezelela ezimweni eziningi, kodwa kusamele ubheke isimo sonke! Manje njengoba uqala ngoZynn, awukwazi ukudala umonakalo omkhulu emndenini wakwaSu. Lo mfana uthinteka ngokuphelele nguYise wakhe. Yini iphuzu lokumbopha? Esikhundleni salokho, unikeze iSu Family isizathu sokusihlasela! ”
UCharlie uthe akanandaba, “Angikwenzelanga iWade Family. Kungukumvumela akhokhe inani le-Anti-Wade Alliance emuva ngaleso sikhathi. Lapho ebhekise kubaba, ngangizomkhomba manje. Angimbophanga nje kuphela, kodwa futhi bengizomyisa eNtabeni iWaderest emkhosini wokukhulekela amadlozi. Ngigxile emathuneni abazali ukuvuma amaphutha abo! ”
UZhongquan wamangazwa amazwi kaCharlie, wabe esethi: “Wena… uzama ukuphoqa umndeni wakwaSu ukuthi ulwe nathi emazinyweni! Uma kunjalo, ngingavele ngingawenzi umcimbi wokukhulekela amadlozi kulo nyaka. Futhi akumele siqale impi nomndeni wakwaSu manje! Sesivele senze umndeni wakwaSu ungagculiseki neze. Inqobo nje uma silinda ngokubekezela, uhlangothi olungaphezulu ngokuqinisekile luzocindezela umndeni wethu kancane kancane. , Kufana nokusiza umndeni wakwaSu ukuphambukisa ukunaka kusuka phezulu. Lapho isikhathi sifika, inkathazo izokwehlela phezu kwethu… ”
UCharlie waklolodela wathi: “Mphathi, ungesabi kangako, lolu daba akuyona into obuyicabanga. Kuyinkimbinkimbi kakhulu, futhi ungaqiniseka ukuthi ngithumele uZynn eSyria, akekho ongamthola, futhi ngeke ngazise umhlaba wangaphandle ukuthi ukuphi, ngakho ngeke kukulimaze. ”
UZhongquan uthe akasizi ngalutho: “Charlie, ucabanga ukuthi kungani umbuzo ulula kangaka? Lo muntu wanyamalala eShangri-La. Noma ngabe ubhekana nayo ungakhombisi mkhondo, sisenamazwi ayikhulu sinecala futhi sinecala! ”
UCharlie wamomotheka: “Mphathi, umbuzo wokuqala ongibuze wona bekungukuthi Yini?”
UZhongquan ubuze ngokumangala: "Ini?"
UCharlie uthe, "Umbuzo wokuqala owangibuza wona ngenkathi ucingo lusanda kuxhunywa."
UZhongquan uphumele obala: “Ngikubuze ngokunyamalala kukaZynn. Er, ukwenzile? ”
UCharlie wafutheka, wathi ngokunganaki: “O, bekungeyimi.”
“Uh…” uZhongquan waphelelwa amazwi ngalesosikhathi, wabe esethi akasizakali: “Charlie, uyabhoreka… UChengfeng naye akayona ingane. Uma ngimtshela lokhu, uzokukholwa? ”
UCharlie wamomotheka wathi, “Ngabe ikhona indlela angayikholwa ngayo? Mtshele, uMnu Zynn Su akakaze aye eShangri-La. ”
UZhongquan ubengakwazi ukuzisiza: “Lusho ukuthini lolu hlobo lobuchwepheshe obunjengengane?
UCharlie washo ngokuqinile, “Angiyena umuntu oyisazi, yisimo sangempela. UZynn akazange ahlale eShangri-La. Imininingwane yokungena ayinalo igama lakhe, futhi nomqaphi lapho akanalo irekhodi lokungena kwakhe ehhotela, uyaqonda? ”
UZhongquan uphuthume wambuza: "Uyisulile yonke ividiyo yokugadwa ngesikhathi engena." "Cha." UCharlie uthe kancane, "Ngesikhathi engena, bekumele kuthuleke." Eduzane noTakehiko Ito, kepha esaba ukutholwa ubunikazi beqiniso bukaShangri-La, ngakho-ke wacela abantu abangaphansi kwesandla sakhe ukuba bavule igumbi, wabe esezifihla wangena ngokuthula, edlula ukubhekwa, ngokwemvelo akazange ashiye noma yiluphi ulwazi lokungena.
Ngakho-ke uma uChengfeng ekuthola futhi, umane umtshele ngqo, uthi uhlolile imininingwane yokungena kuyo yonke iShangri-La, futhi akekho umuntu onjengoZynn. Uma engagculisekile, ungamcela ukuthi akhiphe iZynn aye eShangri-La. Woza nobufakazi, noma ayeke iye ngqo emaphoyiseni. ”
Ngemuva kokukhuluma, uCharlie uphinde wathi: “Ngemuva kwalokho ungamphinda futhi umbuze futhi ukuthi ubesho ukuthini, ukuthi ngabe ufuna ngamabomu yini ukubamba iWade Family futhi athole isizathu sokuqala impi noMndeni wakwaWade.
UZhongquan bonke balalela okumangazayo. Ekuqaleni, bheka, uCharlie uthe lo mbono awuthembeki kakhulu.
kepha zama ukuthola ukusondela, futhi uzizwe sengathi kusebenze.
Cabanga futhi, abantu abakwazi ukumangala lapho bebabaza ngisho nengqondo yakhe Ehluleka ukufihla injabulo yakhe, wabubula: “[i-imeyili ivikelwe], uma uZynn ezulazula angene eShangri-La, khona-ke kufanele abe nesibopho esingenakuphikiswa sokulahlekelwa yiShangri-La, njengoba iShangri-La ingeyomndeni wakwaWade. Akunakwenzeka neze ukuthi umndeni wakwaWade unikeze incazelo.
“Kodwa umnyango weShangri-La uvulwa amahora angama-24 ngosuku. Le ndodana uZynn kusobala ukuthi ingangena, kepha kufanele ungene ngesinyenyela njengegundane, futhi awushiyi mkhondo ngokuthanda kwakho, lapho-ke ungaba ngumuntu othanda ukuthula [i-imeyili ivikelwe] uma ulahlekelwa ekhanda lami, lokhu kuyihlaya ngempela.
Ecabanga ngalokhu, wavele wajabula wavele wathi: “Charlie, kuvela ukuthi kade wakucabanga lokhu. Le nto iyesabeka ngempela.
UCharlie uthe akanandaba, “Angikwazi ukukhuluma ngobuhle, kepha ngeke kukulethele inkinga, kepha noma ngabe usho njalo, ungenza iSu Family ilahlekelwe isimungulu. Umndeni weSu uzokuqopha nakanjani ukunyamalala kukaZynn ekhanda lakho, kepha ngisadla kancane, ngakho-ke kuzofanele usize ngalokhu.
UZhongquan wamomotheka wathi, “Akunandaba. Uma nje uChengfeng engenabo ubufakazi obuqondile obukhombisa ukuthi ukunyamalala kunokuthile okuhlobene nomndeni wakwaWade, akanasizathu sokuqala impi ngokumelene nathi. Uma singekho isizathu sokuqala impi bese uphoqa impi, abantu abangenhla banemibono yabo Kuzoba kukhulu kuphela, ngakho-ke ngale ndlela, uChengfeng nakanjani ngeke alokothe ​​enze iphutha.
Wayengaba yisimungulu kuphela futhi aqede. Waphinde wabuza ephuthuma: “Konje, uCharlie, kungani uthumele uZynn eSyria? Nalokho futhi ngaphansi kwenduna yempi okuthiwa nguHamid. ”
UCharlie akazange amangale lapho ezwa ekhuluma ngoHamid. Emva kwakho konke, lonke uhambo oluya eSyria lwaluhlelwe nguChester ongaphansi kwakhe, futhi uHamid wammukisa. Ngaleso sikhathi, uChester naye wambona. UChester nakanjani uzobika lezi zimo kuZhongquan.
Ngakho-ke, uCharlie naye uvumile ngokukhulu ukuphana, wathi: “Ngacela uZynn ukuthi axhase uHamid ngemali eyizigidi eziyi-100 zamadola aseMelika, ngabe sengimthuma lapho ukuzozibonela impilo. Indawo ihlukanisiwe nezwe. Uma nje ngingamyeki ahambe, umndeni wakwaSu kungenzeka ungamtholi iminyaka engamashumi amahlanu.
UZhongquan akakwazanga ukuzibamba kodwa wathi ngenjabulo: "Kuyamangalisa futhi kwenziwe kahle."
Uthandile okuqukethwe? Siza ukufinyelela abantu abaningi:
Chofoza ukuze wabelane on Pinterest (Izovulwa ewindini elisha)
Chofoza ukuze wabelane ku-yocingo (Ivula ewindini elisha)
Chofoza ukuze wabelane ku-Pocket (Ivula ewindini elisha)
Chofoza ukuze wabelane on LinkedIn (Izovulwa ewindini elisha)
Chofoza ukuze wabelane on Tumblr (Izovulwa ewindini elisha)
Izigaba inoveli Amathegi Bhuka i-Millionaire Son-in-Law PDF, bhuka umkhwenyana wesigidigidi pdf mahhala, Indodana kaMillionaire eMthethweni, Son Millionaire ku-Law Novel, UMkhwenyana Wezigidigidi PDF, Indodana Emangalisayo Emthethweni, Indodana Emangalisayo Ezomthetho PDF, Indodana kaMillionaire eMthethweni, Incwadi kaMkhwenyana kaMillionaire, inoveli yomkhwenyana usozigidi, umkhwenyana wesigidigidi pdf Imeyili kwemikhumbi
Isahluko sama-3005 seNdodana Emangazayo eMthethweni Novel Free Online
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2762 - 2763
Faka ikheli lakho le-imeyili ukuze ubhalisele kule blog bese izaziso of zikhala amasha nge imeyili.
Joyina abanye ababhalisile abangu-25,090
© 2021 XperimentalHamidPlay